Mareykanka oo War ka soo saaray Duqeyn ka dhacday Gobolka Hiiraan | Wardoon
Home Somali News Mareykanka oo War ka soo saaray Duqeyn ka dhacday Gobolka Hiiraan
Mareykanka oo War ka soo saaray Duqeyn ka dhacday Gobolka Hiiraan
War ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Qaaradda Afrika ayaa lagu faah faahiyay howlgal ka dhan Al Shabaab, kaasi oo ka dhacay bartamaha Soomaaliya maalintii Arbacada aheyd, waxaana Mareykanka uu sheegay in uu Shabaab gaarsiiyay Khasaare.
Warka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Soomaaliya ay bartilmaameedsadeen deegaanka Shabeelley oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
24 ka tirsan Al Shabaab ayaa lagu dilay duqeyntaasi, iyadoo uu burbur soo gaaray saldhiggii ay halkaasi ku lahaayeen Shabaab.
“Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an sii wadista beegsiga Al Shabaab si ay uga hor tagaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan, iyadoo sidoo kale mar walba la xaqiijinayo in aan khasaare dhimasho iyo dhaawacba soo gaarin dadka rayidka ah”. ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Taliska Mareykanka.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Magacaabista Wasiiradda Koonfur Galbeed +COD
Next articleNabad iyo Nolol oo xaday fikrad uu lahaa Uhuru Kenyatta
Nabadoon ASKAR oo lagu dilay Boosaaso